हड्डी मजबुत बनाउन नछुटाउनुस् यी ५ खानेकुरा:: Naya Nepal
वनशैलीमा आएका परिवर्तनका कारण मानिसहरूको खानपान बदलिएको छ । यसले गर्दा मानिसहरू आजकल छिट्टै बिरामी भइहाल्छन् ।
यही क्रममा हड्डीहरू पनि कमजोर हुन थाल्छन् जबकि शरीर अड्याउने नै हड्डीले हो । यी खानेकुरा खानुभयो भने हाड बलियो हुन्छ ।
बदाम स्वादिष्ट त हुन्छ नै, स्वास्थ्यका लागि पनि लाभदायक हुन्छ । यसमा भएको क्याल्सियम, भिटामिन ई, ओमेगा ३ फ्याट्टी एसिड र फस्फोरस हुन्छ र यी तत्त्वले हाड बलियो बनाउँछन् ।
हुन त कमै मान्छेलाई मात्र फर्सीको तरकारी मन पर्छ तर यसका भएका केही पोषक तत्त्व अरू तरकारीमा पाइँदैन । फर्सीको बियाँमा फोस्फोरस प्रचूर मात्रामा पाइने हुनाले हाडलाई बलियो बनाउँछ ।
हाड बलियो बनाउनुछ भने आहारमा गहुँको पाउरोटी समावेश गर्नुस् । यसमा टन्नै फोस्फोरस हुन्छ ।
मांसाहारी हुनुहुन्छ भने माछा खाने गर्नुस् । यसमा भएको भिटामिन, खनिज र फोस्फोरस जस्ता पोषक तत्त्वले हाड बलियो बनाउँछ ।
गेडागुडीले पनि हाड बलियो बनाउँछ । आहारमा यसलाई समावेश गर्नुस् ।
वन व्यवस्थापन: विवाद किन, कसको के स्वार्थ?
देशभरिका सयौँ वनमा लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबारे छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले विभिन्न ‘बेथिति’लाई उजागर गरेको छ।
हाल नेपालका साढे सात सयभन्दा बढी सामुदायिक वन, ३१ वटा साझेदारी र सातवटा चक्ला वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ लागु भएको बताइन्छ।
तर सांसद प्रदीप यादव संयोजकत्वको उपसमितिले हालै बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा ‘वन फँडानी भइरहेको’ औँल्याउँदै उक्त कार्यक्रमलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
यादवका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनले सालको रूख काट्नैका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
“त्यसैले यो कार्यविधि नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका हौँ,” यादवले केही दिनअघि बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा भने।
वन: मासिन्छ तर नियमअनुसार किन हुर्काइन्न?
उपसमिति संयोजक यादवका अनुसार प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा यस प्रकार छन्:
काठ बेच्नका लागि जिल्लास्तरमा बिचौलिया ठेकेदार खडा गर्ने गरिएको
स्थानीय पत्रिकामा नाम मात्रको बोलपत्र आह्वान गरी सस्तोमा काठ विक्री गरिएको
कैलाली, कञ्चनपुर, नवलपरासी, सिन्धुलीका राष्ट्रिय वनहरूमा बढी बदमासी भएको
अनुमति दिइएको भन्दा डेफोको मिलेमतोमा बढी रूख कटानी गरिएको
रूख काट्दा वनमा एउटै नम्बरको दुइटा टाँचा लगाइएको
पछि काटेर फेरि बेच्न सकियोस् भनेर पाँच फिट माथिबाट रूख काटिएको
काठ तस्करहरूसँग वनका कर्मचारीदेखि स्थानीय नेतासम्मको साँठगाँठ देखिएको
कारबाही गर्न सिफारिस
प्रतिवेदनले सम्बन्धित डेफोहरूलाई निलम्बन गर्न र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस समेत गरेको छ।
“नेताले त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दैनन्। त्यसैले कर्मचारीले बयान दिएपछि कहाँ को-को नेता संलग्न भए भन्ने कुरा थाहा हुन्छ,” उनले भने।
“२०७१ सालमा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएकोमा त्यसमा संलग्न कर्मचारीबारे पनि अनुसन्धान गर्न हामीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भनेका छौँ।”
ब्राजिलबाट नेपाल आएका रेन्जर भन्छन्: संरक्षणको हुटहुटी बढ्यो
उपभोक्ता महासङ्घको तर्क
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अध्यक्ष भारती पाठक उपसमितिले सुझाएका कुरा आफूहरूले २०६७ सालदेखि नै उठाउँदै आएको बताउँछिन्।
“कार्यविधिबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भएन। त्यसैले त्यसलाई खारेज गरी दिगो व्यवस्थापनतर्फ लागौँ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं।”
यद्यपि वन संरक्षण क्षेत्र विस्तार गर्न उपसमितिले दिएको सिफारिसप्रति महासङ्घले असहमति जनाएको छ।
महासङ्घले भनेको छ, “…उक्त सिफारिस तत्काल सच्याई वन ऐन २०७६ द्वारा प्रदत्त स्वायत्त अधिकार बमोजिम सामुदायिक वनका माध्यमबाट चुरे क्षेत्रको वन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनिश्चित गरियोस्।”
‘केही सीमित तत्त्वबाट’ सामुदायिक वनको स्वायत्तता असर परेको भन्दै महासङ्घले सीमित व्यक्तिका कारण उपसमितिको सिफारिस अनुसार उपभोक्ता समूहलाई कारवाही गर्न नमिल्ने दाबी समेत गरेको छ।
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ, फरेस्ट टेक्निसियन्स एसोशिएशन अफ नेपाल, जुनियर वन प्राविधिक सङ्घ र मधेशका लागि वन लगायत समूहले उपसमितिको निष्कर्षप्रति विमति जनाएका छन्।
उनीहरूले समितिको अध्ययन प्रतिवेदन “एकपक्षीय, पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र आधारहीन” भएको आरोप लगाएका छन्।
“…विज्ञहरूको राय सुझाव अनुसार मात्रै कुनै पनि प्राविधिक विषयबारे निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्छौँ।”
“अन्यथा हामी प्राविधिकहरू पेशागत हकहित र सम्मानका लागि कडा सङ्घर्षका कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ र यसबाट वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा पर्न जाने असरप्रति सरकार नै जिम्मेवार हुने जानकारी गराउँछौँ,” असोज १९ गते जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नगरिँदा वार्षिक ठूलो मात्रामा काठ खेर गइरहेको र व्यवस्थापन नगरिएमा वनमा पुनर्उत्पादन नै नहुने दाबी गरेका छन्।
जैविक विविधतासम्बन्धी एक अध्येता कमल मादेन पनि विगतमा विभिन्न पक्षसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याइएको बताउँछन्।
“मैले देखेको ठाउँमा समुदायलाई गुमराहमा राखी जहाँजहाँ राम्रा रूख छन् त्यहीँत्यहीँ काटिएका छन्,” मादेनले बीबीसी न्यूज नेपालीसित भने।
“यो कार्यक्रमलाई यदि निरन्तरता दिने हो भने हाम्रा वन नै सखाप हुन्छन्।”
प्रभावकारी संरक्षणका लागि समुदायको संलग्नता बढाउनुपर्ने र कडा नियमन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
काठमाडौंका होटल कोरोना संक्रमितले भरिभराउ हुँदै, अस्पतालको विकल्प बनेका होटलमा कस्तो छ सेवा सुविधा?
काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाभित्र पछिल्लो समय कोभिड १९ संक्रमित ह्वात्तै थपिएका छन्। देशभर थपिने संक्रमितमध्ये झन्डै आधा यही हुन थालेका छन्। संक्रमितको सङ्ख्या थपिने दर बढ्दै जाँदा उनीहरुलाई राख्न अस्पतालका बेडसमेत अपुग भइसकेको छ।
कमलादीमा रहेको होटल ल्यान्डमार्कमा रहेका ४५ वटा रुममध्ये आधाजसो यस्तै ‘ग्राहक’ले भरिएको छ। आधाभन्दा धेरै रुम अकुपाई भएको होटलका कर्मचारी पर्वत थापाले जानकारी दिए।
‘अहिले विदेशबाट आएकाहरु हुनुहुन्छ। कोभिड १९ संक्रमित भने हुनुहुन्न। उहाँहरु सबै कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङमा पर्नुभएकाहरु हो,’ थापाले भने।
‘म आएको केही दिन भयो। राम्रो व्यवस्था छ भनेर सुनेर आएको हो। ठिकै लाग्यो,’ होटलमा बसिरहेका एक कोभिड संक्रमितले भने। होटलको रुममा बसेका यस्ता संक्रमितलाई होटलको कोठाभन्दा बाहिर निस्किन दिइँदैन। उनीहरुले नै कोठा सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउने गरेको छ। एलो पेगोडामा दैनिक ५ हजार तिर्नुपर्छ। यसमा अतिरिक्त सेवा सुविधा र ट्याक्स भने छुटै तिर्नुपर्छ। यसमा पनि ब्रेकफास्ट, लन्च, हाइ टी र डिनरको व्यवस्था गरिएको छ।
लाजिम्पाटमा रहेको पाँच तारे सांग्रिला होटेलले पनि कन्ट्याक्ट् ट्रेसिङमा परेकाहरुलाई राख्दै आएको छ। ‘एयरलाइन्सका कर्मचारीहरु हुनुहुन्थ्यो। अहिले भने खालीजस्तै छ। हाम्रो होटलमा कोभिड-१९ को कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरुलाई राख्ने गरिएको छ,’ होटलका कर्मचारी बबिता पाण्डेले जानकारी दिइन्।
होटेल आर्य तारामा ४० वटा रुम रहेका छन् जसमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकालाई राखिन्छ। केही समयअघि यस होटलमा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाहरु राखिएको थियो। अहिले भने खासै ग्राहक नभएको होटेलका कर्मचारी मेगा अमगाइले जानकारी दिए। ‘हामीले सुरुमा राखेका थियौं। अहिले पनि आए भने राख्छौ,’ उनले भने। होटलले एक जनाको ३२ सय रुपैयाँ लिँदै आएको छ। दुई जना बस्ने भए चार हजारमा एउटा रुम उपलब्ध गराउँछ यसले। यसभित्र खाना र खाजासमेत रहेको छ। सर्भिस चार्ज भने लाग्दैन।